Home » Conseils sur les blogs
09.05.2020 Category: Conseils sur les blogs
E nwere ihe simple ọtụtụ ndị na-ede blọgụ ji sị "ego dị na ndepụta."
Imirikiti ndị ọbịa gị na ebe nrụọrụ weebụ anaghị aga ịghọ ndị na-eguzosi ike n’ihe. Eleghị anya ha na-achọpụta ọtụtụ, ọbụna ọtụtụ narị weebụsaịtị na nke a, ọ dịkwa mwute na ọ dị mfe ịchefu nke gị mgbe ha gụsịrị ya – ọ gwụla ma ị na-eso ha.
W nwere ike iche na mgbasa ozi ọha na eze bụ ụzọ dị mma iji mee ka ndị ọbịa gị nwere mmasị. Ma mgbasa ozi mgbasa ozi nwere ojiji ya, mana ọ bụrụ na ị na-ewuli ndị na-ege gị ntị na-eguzosi ike n’ihe ma na-echekwa blog gị, ọ pụghị ịkatọ email.
Courriel nwere ike ịbụ nkà na ụzụ oge ochie tụnyere mgbasa ozi ọha mmadụ, mana ọ ka mma karịa na ị natara ozi gị. N’elu mgbasa ozi mgbasa ozi, ozi dị iche iche na-akụkarịkwa ụda. N’aka nke ọzọ, email na-anọ n’ime igbe mbata nke ndị na-ege gị ntị, ọ gaghị apụkwa ma ọ bụrụ na eleghara ya anya.
Na site na email, ị gaghị enwe ihe gbasara njide agwa, oyiyi nkọwa, ụgwọ ruru, ma ọ bụ okwu mkparị.
Ọ bụ ya simple ego ji dị na listi ahụ. Nke a bụ otu esi nweta ndepụta gị na-arụ ọrụ maka gị.
1 Kedu esi esi mepụta listi email gị?
1.1 1 – Courriel ịdị Nwepụ
1.2 2- Freebies na Ọdịnaya Nwelite
2 Otu esi echeghari onwe gi
3 Répondeur automatique Ngwaọrụ
3.1 1- Kpọtụrụ Kọntaktị
3.2 2- GetResponse
3.3 3- AWeber
3.4 4- MailChimp
4 Malite Ịmepụta Ntọala Gị Taa
Kedu esi esi mepụta listi email gị?
N’ụzọ doro anya, iji mee ego ọ bụla site na email gị répondeur automatique, ị ga-ebu ụzọ nweta ndị debanyere aha.
Mana ọ bụghị naanị ndị debanyere aha ọ bụla – naanị ị chọrọ ndị debanyere aha ndị nwere mmasị na ihe ị nwere inye. Ọ dị mkpa ilekwasị anya mgbalị gị na ịmepụta listi àgwà ndị na-agụnye ndị na-ege gị ntị.
1 – Courriel ịdị Nwepụ
Ọ bụrụ na ịchọta ndị debanyere aha email bụ ihe mgbaru ọsọ bụ isi nke blog gị, ịkwesịrị ime ka ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị dị na ya ya. Ụdị nhọrọ gị ga-esi na ọdịnaya gị pụta. Ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị jupụtara, ọ dịghị onye ga-ahụ ụdị nhọrọ gị. Kọwaa ihe ndọpụ uche na-enweghị isi ma jide n’aka na ụdị ntinye gị dị anya.
Chee echiche iji otu onye na-enweghị iwe, enyi-enyi na-emepụta ụdị iji nweta ọbụna ndị ọzọ ndị debanyere aha. N’ebe a na WHSR, anyị na-eji Popups Ninja. W nwere ike zụta Popups Ninja na CodeCanyon. Anyị na-akwado OptinMonster, un WordPress ngwa mgbakwunye nwere ike ịmepụta mara mma ọpụpụ na ụdị ụdị.
2- Freebies na Ọdịnaya Nwelite
Usoro a na-ewu ewu iji nweta ndị ọzọ debanyere aha email bụ site n’inye ya freebie, dịka akwụkwọ e-akwụkwọ ma ọ bụ ozi email, nye ndị debanyere aha ọhụrụ.
Uzo ozo edeputara nke oma nke na-ewu ewu na nso nso a bu ihe ndi ozo di mma, ebe ndi na-ede blọgụ na-enye ndi mmadu na-enye onwe ha ohere iji kwado ("nweta nkwalite").
Mgbe ị na-enye freebies chọrọ ego ihu oge n’ihu, ọtụtụ ndị na-ede blọgụ na-achọpụta na ọ na-enyere aka ịgbakwụnye mmelite email ha.
Otú ọ dị, jide n’aka na ị ga-eburu n’uche na ị chọghị ka ndị ọzọ debanyere aha – ịkwesiri nri ndị debanyere aha.
Nwepu ego gị kwesịrị ịbụ kpọmkwem ihe ndị na-eleta anya gị chọrọ ibudata. Ọ bụrụ na nnwere onwe gị na-adọta ndị na-egeghị ntị, ọ ga-eme ka ọnụ ọgụgụ dị elu nke ịdebanye aha gị. Tụlee iji ndị na-agụ akwụkwọ na-enyocha ịchọta kpọmkwem ihe freebies na-adọrọ mmasị maka ndị na-ege gị ntị pụrụ iche.
Otu esi echeghari onwe gi
Pat Flynn nke Smart Passive Income na-enweta nnukwu ego nke ego ya site n’ịkwalite Bluehost na LeadPages.
Iji chebaa email gị répondeur automatique, ị ga-achọ ihe ị ga-ere.
Njikọ njikọta bụ ụzọ un e-mail na-ewu ewu iji jiri ego na-emepụta ndị na-emepụta. W nwere ike iji weebụsaịtị dị ka Na-ere ahịa ịchọta njikọ mmekọ mmekọ, ma ọ bụ soro ya na ụdị ndị ị na-eji ndị nwere mmemme mmemme, dị ka gị ụlọ ọrụ weebụ.
Je nwekwara ike inweta ego site n’inweta ngwaahịa na ọrụ gị. Ngwaahịa dị iche iche, dị ka ọmụmụ na ebook, bụ ụzọ nkịtị iji nweta ego na-enweghị ego. Ọ bụ ezie na ha chọrọ oge iji nweta ego iji mepụta ngwaahịa ahụ, ha nwere ike ịnọgide na-enweta ego ị na-enweta ngwa ngwa ma ọ bụrụ na gị onwe gị zuru ezu, n’enweghị ụla aụụ gị.
Ntinye akwụkwọ 4 iji tinye listi nzipu ozi na ndị ahịa
Ọ bụghị ozi ọ bụla ka ị ga-ere ahịa siri ike, ma ọ bụ na ị ga-enwe ọtụtụ nzapu.
Otú ọ dị, ị ga-ahapụ ụzọ meghere maka ahịa na email ọ bụla. Ọbụna ozi ịntanetị gị nwere ike ijikọta na saịtị gị, ebe ndị ọbịa nwere ike ịchọta njikọ ịzụta ngwaahịa gị ma ọ bụ pịa njikọ njikọ gị.
Na ozi ịmalite gị, ị ga-ewulite ntụkwasị obi na ndị na-ege gị ntị. Ọ bụrụ na ị na-amalite ma ndepụta gị ka dị obere, atụla ụjọ ịkpọ ndị debanyere aha ịzaghachi na kpọtụrụ gị ozugbo.
Maka ihe kachasị ego, nye ọtụtụ ngwaahịa na ọrụ na ọnụahịa ihe dị iche iche na usoro gị niile. Naanị n’ihi na email gị nke na-ere ihe 500 $ adịghị arụ ọrụ, nke ahụ apụtaghị na ị ga-ada mbà na ndị ahụ debanyere aha. Gbalịa ịgbasa usoro ntanetị gị iji nye otu obere ihe 50 $.
Répondeur automatique Ngwaọrụ
1- Kpọtụrụ Kọntaktị
N’etiti ndị ọbịa ndị ọzọ email ahịa ngwá ọrụ, Nọgide na-emechi bụ aha na-abịa mgbe niile (ọ dịghị iwu ọ bụla). E wezụga ọrụ ya n’ahịa ahịa, saịtị ahụ agbasawokwa iji tinye ọrụ ndị metụtara ahịa ahịa ndị ọzọ. Lelee Nlele kọntaktị Tim si na mgbe niile chọpụta ihe.
GetResponse bụ ngwá ọrụ ahịa ahịa anyị a akwadoro na nnukwu elekwasị anya na ndị na-emepụta ihe. Ha anọwo gburugburu karịa afọ 15. Anyị na-eji ya ịmepụta, zipụ, ma soro akwụkwọ akụkọ email na ndị debanyere aha anyị na ọnụahịa dị ọnụ. Lelee Ntụleghachi nke Jerry GetResponse chọpụta ihe.
AWeber bụ ihe na-ewu ewu na listi email nke na-agụnye njirimara na-arụ ọrụ. Ha na-enyekwa ngwá ọrụ email na-email ka ndị na-debanyere aha gị nwere ike ịnweta ozi ntanetị ọhụrụ gị, na-eme ka akwụkwọ akụkọ gị kpamkpam.
MailChimp bụ akwụkwọ ozi email na-ewu ewu bụ ndị a ma ama maka ịdị mfe nke ojiji na ezigbo ndebiri (ọ bụghị ịkọ abụ mara mma ha mascotte). MailChimp na-enye ngwá ọrụ na-arụ ọrụ na akaụntụ ha akwụ ụgwọ naanị. Site na ngwa ngwaọrụ ha, w nwere ike ịmepụta ọtụtụ ozi ịntanetị maka ndị debanyere aha ọhụrụ, ma ọ bụ ọbụna tinye ozi ịntanetị ka a zitere mgbe ihe ụfọdụ mịụụụụụụụụịịịịịị.
Malite Ịmepụta Ntọala Gị Taa
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịde blọgụ ego, ọ dị oké mkpa iji wuo listi email.
Ozi ọma ahụ bụ, ọ dịtụbeghị oge! Bido site na ịbanye maka ntinye akwụkwọ nhọrọ email gị, na ịdebe ụfọdụ nwepu aha na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ozugbo i nwere echiche nke ihe ndị na-ege gị ntị chọrọ, ị nwere ike ịmepụta ngwaahịa ha ga-ahụ n’anya.
Ọ bụ ezie na ndị na-emepụta ego na-ewepụta ego na-ewepụta oge iji guzobe, ozugbo ha nọ n’ọnọdụ, ha nwere ike ịbụ ezigbo ego na-enweta ego maka ndị na-ede blọgụ na azdịị.
E nwere ihe mere ọtụtụ ndị na-ede blọgụ ji sị "ego dị na ndepụta."
Otu esi eme ka ego jiri aka na ndi nzaghachite אימייל
האם הם רק ọtụtụ ndị na-ede blọgụ ji sị "אגו dị na ndepụta." Imirikiti
Otu esi eme ka ego jiri alias na ndi nzaghachite Email
E nwere ihe belaka ọtụtụ ndị na-ede blọgụ ji sị "ego dị na ndepụta."
Eikä ole pelkkää ụtụtụ ndị na-ede blọgụ ji sị "ego dị na ndepụta." Imirikiti
Még nem pusztán a „nd ede na-ede blọgụ ji sị” "ego dị na ndepụta."
Articles en vedette 0
Chọta ezigbo Courriel Bochum & Mụta otú e si ahazi Courriel Courriel gị
Maka onye ọrụ ahụ, un e-mail na-ejikọkarị na ndị isi dị mkpa dịka Google
[Arolwg Marchnata] עלות Adeiladu Gwefan: Amcangyfrif yn seiliedig ar Top 400 UpWork Freelancers
Βασικός οδηγός HTML για ανδρείκελα
18 thèmes WordPress de WooThemes examinés
Kuinka luoda upeita sosiaalisen median videoita 5 minuutissa
यू बी नाथो ई इकेथांग ई सेत्सोंतोको वर्डप्रेस जोंग?
26 ingyenes weboldal-készítő, csodálatos webhelyekkel
6 तरीके Suuq Ganacsigu Waa Sida Loo Toos ऑनलाइन
Le voyage de BlogVault d’un projet de loisir à une entreprise rentable
4 ნიმუშის წერილები აბონენტების საფოსტო გზავნილების აბონენტებად გადაქცევად
SiteGround की समीक्षा
26 δωρεάν δημιουργοί ιστότοπων για τη δημιουργία καταπληκτικών ιστότοπων
Došlo je do dobre zabave fifi aaye Google han ni Wodupiresi
Kako GoDaddy zarađuje
הוספת שפות שונות לוורדפרס
Aṣey nri AccuWebHosting nipasud Imudarasi Aw Onn Onibara
Malo Opambana 30+ Omwe Amapereka Zithunzi Zaulere za Zithunzi & Zithunzi Za Blogok
I-25 I-Web Web Font Sicuro Sicuro kwiWebhusayithi Yakho
Critique de l’hébergement Little Oak
A kreativitás átvitele a vászonon túl a vászonra
Çawa Xweseriya Pirtûka Pirt Pka Pirt Weka Weşanê # 5: 11 Wek Bersivên Pirtûka Pirtûka We